Cali Gacal Casir: Aniga Iyo Madaxweyne Kuxigeenka Galmudug Xabsi guri ayaan ku nahay Cadaado | SAHAN ONLINE
Cali Gacal Casir: Aniga Iyo Madaxweyne Kuxigeenka Galmudug Xabsi guri ayaan ku nahay Cadaado
Cali Gacal Casir
CADAADO – Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa sheegay in isaga iyo Madaxweyne Kuxigeenka Maxamed Xaashi Carabey ay xabsi guri ku yihiin Cadaado kadib markii ay maalmo ka hor kasoo horjeesteen go’aankii uu soo saaray Madaxweyne Xaaf ee taageerada loogu muujiyey Isbaheysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo.
Cali Gacal Casir oo waraysi siiyey Laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in Madaxtooyada Cadaado ay ku xaniban yihiin isla markaana saddex jeer loo diiday iney banaanka u baxaan.
Runtii Cadaado waxaa ka taagan arrin aad isugu cakiran oo aad loo abuurayo, aniga, Madaxweyne kuxigeenka iyo Guddoomiye kuxigeenka Baarlamaanka, xabsi guri ayaa nahay muddo todobaad ah”ayuu yiri Guddoomiye Cali Gacal Casir oo intaa ku daray in Madaxweyne Xaaf uu bixiyay awaamiirta xabsiga guriga looga dhigay.
Waxa uu sheegay in uu jiro mooshin ay diyaariyeen Xildhibaano ka tirsan Galmudug oo qorshihiisu yahay in xilka looga qaado,wuxuuna ku tilmaamay in diiday kulamadii Baarlamaanka.
Mar la weydiiyey waxa ay isku hayaan Madaxweynaha ay tahay go’aankii uu ku qaatay Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraatka ayuu sheegay in cid walba ay xor u tahay fikirkeeda isla markaana aanay jirin cid qasbi karta.
Madaxda sare ee Galmudug ayaa khilaafka u dhaxeeya uu gaaray meeshii ugu xumayd ,iyadoona warqad amar ah oo uu soo saaray Madaxweyne Xaaf uu ku mamnuucay shirarka siyaasadeed ee wax u dhimi kara maamulkiisa in aan la qaban karin.